ဂိမ်း မှတ်ပုံတင် နံပါတ် မထ ုတ် ပေး ဟု စာရင်းစစ် ငြင်းဆို - Pandaily
Feb 21, 2022, 21:04ညနေ 2022/02/21 23:08:47 Pandaily
တရုတ် မီဒီယာ တင်ပို့မှုChinaStarMarket.cnတနင်္လာနေ့တွင် ဂိမ်း မှတ်ပုံတင် နံပါတ် အသစ်များ ထုတ်ပေး ခြင်းကို ရပ်ဆိုင်း ခြင်းသည် ဂိမ်းကစား ခြင်း အတွက်အဓိက ဆိုးကျိုး ဖြစ်သည်။ ဆယ်ကျော်သက် ဂိမ်း များကို စွဲလမ်း မှုနှင့် ကမ္ဘာ ပျက် မည့် နေ့ မြင်ကွင်း များ၊
ဤအစီရင်ခံစာ အပေါ် သက်ရောက် မှုရှိသည့် B Station, Fast Hand, Tencent နှင့် 37 Games အပါအ ၀ င် ဂိမ်း ကုမ္ပဏီများ ၏ရှယ်ယာ များသည် ၉. ၅၉% ၊ ၇. ၂၉% ၊ ၅. ၂၃% နှင့် ၆. ၄၆% အသီးသီး ကျဆင်းခဲ့သည်။
ပြည်နယ် စာနယ်ဇင်း နှင့် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ မှု အုပ်ချုပ်ရေး ပြန်ကြားချက်Sina နည်းပညာ“ဒီ အစီရင်ခံစာ အတွက် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း တုန့်ပြန်မှု မရှိပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ဟာ ပုံမှန်အားဖြင့် ဂိမ်း မှတ်ပုံတင် နံပါတ် အတွက် လျှောက်လွှာ တွေ ကိုလက်ခံရရှိ နေတုန်း ပဲ” ဟု သူ ကပြောသည်။ ပိုမို တိ က်တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို သူတို႔ရဲ႕ တရားဝင္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ မွာ တင္ သြားမယ္လို႔ အစိုးရက ျဖည့္စြက္ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။
အာဏာပိုင်များက အတည်ပြုထားသော ဂိမ်း များအတွက် နောက်ဆုံး ကြေငြာ ချက်ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၂ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန် မှ စ၍ ဂိမ်း မှတ်ပုံတင် နံပါတ် များအတွက် စည်းမျဉ်း သစ် ဗားရှင်း အသစ်ကို မကြာမီ အကောင်အထည်ဖော် တော့မည် ဟူသော ကောလာဟလ များ ထွက်ပေါ်လာ ခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က 2D နှင့် Cyberpunk ဂိမ်း များကို ခွင့်ပြု ခြင်းကို စည်းမျဉ်း သစ် များက တားမြစ် လိမ့်မည်ဟု ကောလာဟလ များ ထွက်ပေါ် ခဲ့သည်။ တရုတ် အလုပ်အကိုင် ရှာဖွေရေး သတင်းအချက်အလက် မျှဝေ သည့် ပလက်ဖောင်း Maimai မှ Lilith Games ၀ န်ထမ်း အဖြစ် အသိအမှတ်ပြု ထားသော အသုံးပြုသူ အချို့က သူတို့ တီထွင် နေသော 2D မိုဘိုင်း ဂိမ်း စီမံကိန်း ပျက်ကွက် ခဲ့ပြီး ဌာန တွင် အလုပ် မှ ထုတ်ပယ် ခြင်းခံခဲ့ရသည်။
လက်ရှိတွင် ပြန်လည်သုံးသပ် ရန် အသုံးပြုသော ဂိမ်း များကို ရှုထောင့် ငါး ခုမှ အကဲဖြတ် ရန်လိုအပ် သည်ဟု ကောလာဟလ များ ထွက်ပေါ် နေသည်။ သူတို့၏ အကဲဖြတ် မှုတွင် ရမှတ် ၃၀ ကျော် သော ဂိမ်း များကိုသာ မှတ်ပုံတင် နံပါတ် အတည်ပြုချက် တန်းစီ တွင် ထည့် နိုင်သည်။ အချို့သော တိကျသော ဂိမ်း အမျိုးအစား များသည် ယခုအခါ ပိုမို တင်းကြပ် သော ဆင်ဆာ ဖြတ်တောက် မှုကို ခံ နေရသည်။